‘Ebola Rosiana’: Tetikasan’Olom-pirenena Mikaroka Momba Ny Fahafatesan’ireo Rosiana Tao Amin’ny Toeram-pitazonan’ny Polisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Febroary 2016 2:41 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Български, русский, Italiano, Français, English
Ilay mpanao gazety, Maria Berezina, no niteraka ny “Ebola Rosiana“, noforonina mba hanarahana maso ireo tranganà fahafatesana any amin'ny tobin'ny polisy, ireo toerana fitazonana ny miandry fitsaràna, ary ireo toerana mifandraika amin'izany sahala amin'ireo toerana fametrahana ny mamo mandra-pisavan'ny taokany. Tsy mandray ho anaty kajiny ireo voafonja efa nahazo didy famonjàna taorian'ny didy navoakan'ny fitsaràna ny antontanisan'ilay tetikasa, fa manisa fotsiny ny fahafatesan'ireo voatazona na niatrika fisamborana vonjimaika.
Nolazain'i Berezina an'i Kashin ny zavatra hitany, ary nanoratra haingana andalana mikasika ireo loza ireo sy ilay fironana mampiahiahy izy, nampitondrainy ny lohateny hoe “Ebola Rosiana.”
Nanapaka hevitra ny hanao ireo angon-drakitra azo jeren'ny rehetra ho mora hita i Berezina ary namorona vohikala iray manokana hafa mihitsy, nindrana ny anaran'ny singan'asan'i Kashin. Na nanomboka niasa ny volana Martsa 2015 aza izy, niverina naka ireo tatitry ny Ministeran'ny Atitany izy mba hahazo ny isan'ireo maty hatrany amin'ny volana Septambra 2014.
Kelikely foana taorian'ny fanombohana azy, nilazalaza ny fanambaràna fanaony foana i Berezina taminà tafatafa ho an'ny vohikala Rosiana Spektr.
Ny volana Oktobra 2015, olompirenena avy ao Vladikavkaz iray, Vladimir Tskaev, notazonina noho ny fiahiahiana ho nanafika polisy manampahefan'ny OMON (hery manokana), ary nolazaina ho maty tao amin'ny hopitaly ny andro taorian'ny nitazonana azy. Nilaza ny polisy fa nakapony tamin'ny tany ny lohany, fa niahiahy ilay tatitra ireo havan'i Tskaev ary nidina an-dalambe mba hanao hetsi-panoherana. Voasambotra taty aoriana ireo polisy niasa noahiahiana ho nidaroka an'i Tskaev, niaraka tamin'ny lehiben'ny departemantan'ny fanadihadianan'ny heloka bevava ao amin'ny tanàna, ary voaongotra tamin'ny toerany ny Minisitry ny Atitany tao Ossétie Avaratra. Iray monja amin'ireo tranga maro ahiahiana ho fanaovan'ny polisy herisetra io ary hoe nahavita namaha ilay olana ireo havan'ny maty. Mbola mijanona ho maizina tanteraka ny ankamaroan'ireo fahafatesana mampiahiahy mitranga any amin'ny toeram-pitazonan'ny polisy.
Taminà tafatafa vao haingana tao amin'ny Daily Dot, nilaza i Berezina fa tsy mbola feno fanantenana izy amin'ny valiny ofisialy avy amin'ny mpampanoa lalàna Rosiana. Taorian'ny fametrahana fanontaniana taminy mikasika ny zavatra ataon'ilay vohikala, napetraky ny Ivontoeran'ny fanjakana Miady amin'ny Mahery Fihetsika, nilaza izy fa nahatsapa toy ny hoe tsy raisin'ireo ho matotra ny asa ataony.